Global Voices teny Malagasy » “Fitorevahana Ho An’ny Fahalalahana” Niara-natao Taminà Tanàna Saodiana Maro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jona 2013 0:49 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Andiany madinidinika fa maro nahitàna vehivavy Saodiana no nanao “Fitorevahana ho an'ny Fahalalahana” nanerana ireo tananà Saodiana maro ny 10 Jona 2013, izay nataon'ireo vondrona mpisolovava tsy mitonona anarana @almonaseron  [ireo mpanohana] hitakiana ny famoahana ireo havany nogadraina. Ary valin'izany, maherin'ny 140 ireo mpanao hetsi-panoherana, lehilahy sy vehivavy, nosamborin'ny miaramila Saodiana nandritra izay roa andro lasa izay.
Loharanom-baovao avy amin'ireo tsy miankina mpiaro ny zon'olombelona no nilaza fa efa maherin'ny 30 000 ireo olona notanàna tsy ara-dalàna [ar], maro amin'izy ireo no niharan'ny fiasamborana faobe, taorian'ny “ady amin'ny fampihorohoroana” 9/11 . Tsy misy didy fampisamborana akory nisamborana ireo olona voatàna ireo ary tsy nahazo maka mpisolovava na niakatra fitsarana. Voararan'ny lalàna ny manao hetsi-panoherana ao Arabia Saodita ka mety ho hihidy any am-ponja am-bolana maro mihitsy ireo mpandray anjara raha sendra tratra. Kanefa izany tsy nahasakana ny fianakavian'ireo voasambotra tsy hankahatra ilay fandraràna amin'ny fiarahana vitsivitsy, efa im-betsaka.
Tamin'ny 4 :55 hariva, ora ao an-toerana, nanambara ny fiantombohan'ilay hetsika i @almonaseron ary nandefa bitska hoe [ar] :
بدأ #اعتصام_الحرية نساء في عدة مناطق في آن واحد فعلى أهالي المعتقلين الإنضمام إليهم فوراً
@almonaseron : Vao nanomboka izao ilay fitorevahana ho an'ny fahalalahana : vehivavy avy amin'ny faritra maro niaraka [nivondrona] taminà fotoana mitovy. Tokony hanatevina laharana azy ireo izao ankehitriny izao ny havan'ireo voasambotra.
Tao Riyadh, andiam-behivavy, izay ny ankamaroan'izy ireo dia fianakavian'i Suliman al-Roushodi , mpitarika ilay fikambanana Saodiana Mpiaro ny Zo Sivily sy ara-Politika, no nitangorona nanoloana ilay Fikambanana Nasionaly Ho An'ny Zon'olombelona izay vatsian'ny governemanta vola, toerana efa nanaovan'izy ireo hetsi-panoherana ihany tamin'ny volana Febroary . Ny zanany vavy, Bahia al-Roushodi , ny iray tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana, nahazo sazy mihantona efatra volana an-tranomaizina taorian'izay hetsika farany natao izay. Vetivety dia voahodidina fiaran'ny polisy efa ho 30 isa  [ar] izy ireo, dia nosamborina ny mpamilin-dry zareo [ar] ary nahazo baiko ny tsy mahazo mihetsika eo . Iray amin'iireo lalàmbe ao Riyadh, King Fahad Road, no nakaton’  ny polisy nandritra ny ora mahabe ny mpifamoivoy mba ho hamoretana amin'ilay fitorevahana. Tamin'ny 6:20, iray tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana, vadin'i al-Roushodi, nandefa bitsika hoe :
@omamar1 : Nosamborin-dry zareo izahay, ary nosamboriny koa ny anadahiko.
Ireo fianakavian'ireo vehivavy voasambotra nifamory nanoloana ny fonja nambara fa nitànana azy ireo . Sary nozarain'i @fatma_mesned  tao amin'ny Twitter
Tamin'ny 11:44 alina, nifamory nanoloana ilay fonja nambara fa nitazonana ireo havany ny fianakavin'ireo vehivavy voasambotra. Nandefa bitsika toy izao i Fatima al-Mesned, zafikelin'i al-Roushodi, :
@fatma_mesned : Ho an'ireo izay maniry hitaky [ny famotsorana] ireo mpanao hetsi-panoherana : eto anoloan'ny fonjan'i al-Malez izahay izao, sampana natao ho an'ny vehivavy. Tohano ireo mpanohana ireo gadrantsika.
Tao Buraydah, vehivavy maro no nivory nanoloana ny “Grand Court”, ary tsy vehivavy irery ihany no tonga nanatevina laharana ilay hetsika taoriana kelin'izay. Tamin'ny 5 :52 hariva ireo miaramila Saodiana no nihodidina ireo mpanao hetsika  [ar]. Raha iny niezaka nizara rano ho an'ny mpanao hetsika iny ny tovolahy iray, dia nohazain'ny polisy sady nosamborina [ar]. Polisy miafina manao fitafiana sivily no nanome baiko ireo vehivavy hiala no sady nanao ramatahora tamin'izy ireo, kanefa tsy nety niala teo izy ireo raha tsy votsotra ny havany (lahatsary [ar]). Niha-nitombo ny isan'ireo vehivavy mpanao hetsi-panoherana mandra-pisian'ilay fisamborana an-kerisetra natao azy ireo. Tamin'ny 8:24 alina, i @almonaseron nandefa bitsika hoe :
@almonaseron : Vehivavy maro no noterena hiakatra anaty fiarabe [an'ny polisy] .
Ny andro manaraka io, 11 Jona, tamin'ny 5 ora hariva, andianà vehivavy sy lehilahy maro ny nifamory hanohitra ilay fisamborana nitranga ny andro talohan'io. Minitra vitsy monja, dia voahodidin'ireo mpitandro filaminana manokana izy ireo  [ar], voadaroka  [ar] ary voasambotra.
Nisy fifamoriana madinidinika hafa natao tany Mecca, Aljouf ary Hial.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/21/49245/
 30 000 ireo olona notanàna tsy ara-dalàna : https://www.youtube.com/watch?v=urILE3ttfYs
 niharan'ny fiasamborana faobe, taorian'ny “ady amin'ny fampihorohoroana” 9/11: https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-human-rights-abuses-name-fighting-terrorism-20090722
 almonaseron : https://twitter.com/almonaseron/status/344090467559960576
 Suliman al-Roushodi: https://twitter.com/s_alrushodi
 tamin'ny volana Febroary: https://globalvoicesonline.org/2013/02/13/saudi-women-protesters-arrested-accused-of-impairing-development/
 Bahia al-Roushodi: https://twitter.com/BahiaAlrushoody
 fiaran'ny polisy efa ho 30 isa: https://twitter.com/omamar1/status/344106871118000129
 dia nosamborina ny mpamilin-dry zareo: https://twitter.com/omamar1/status/344100903126712320
 no nakaton’: https://twitter.com/omamar1/status/344107535755780096
 omamar1 : https://twitter.com/omamar1/status/344111777602224128
 no nihodidina ireo mpanao hetsika: https://twitter.com/almonaseron/status/344104687341027332
 nohazain'ny polisy sady nosamborina: https://twitter.com/almonaseron/status/344122561614995456
 almonaseron : https://twitter.com/almonaseron/status/344143137486303233
 voahodidin'ireo mpitandro filaminana manokana izy ireo: https://twitter.com/almonaseron/status/344457451946528769